MAME 0.184 inovandudza kutsigira kwayo kutsigira | Linux Vakapindwa muropa
Muchaziva mose MAMA, emulator yakagadzirirwa kubatanidza iyo hombe kusiyana kwehardware yemavhidhiyo mitambo iripo, kunyanya kufunga nezve zvekare. Neichi chikonzero, muna 1997, Nicola Salmoria akagadzira chirongwa ichi kuti zviitire nyore michina yeArcade kuita aya ese mazita atiri kutaura nezvazvo. Kune izvi akagadzira iyi modular software umo chimwe nechimwe chikamu chehardware chinoteedzerwa nenzira yemumwe mutyairi.
Mhedzisiro yacho yaive MAME (Akawanda Arcade Machine Emulator) kana akawanda slot muchina emulator. Iyo software inogona kutevedzera mapuratifomu akasiyana kuti akwanise kumutsa iyo mitambo kubva munhandare kana mapuratifomu atove kutsakatika, kana kuti iyo kuregaware yatinofanira kushandisa zvakare kunze kwekufunga Kuti izvi zvikwanisike, iyo emulator chirongwa chinongoda iyo inoenderana ROM yemutambo kuti ugone kuimhanyisa, sekureba sekuvakwa kunotsigirwa.
Zvakanaka, MAME anoramba updating uye akatosvika MAME 0.128. Iyo itsva yekuchengetedza vhezheni yeakawanda awakagamuchira. Tsigiro yemimwe mitambo yeArcade yemitambo yakawedzerwa mairi, uye kumwe kugadziridzwa uye kugadzirisa zvipembenene kwakafungidzirwa nezvazvo. Imwe yeanonyanya kuvandudzwa eiyi vhezheni ndiyo ine chekuita nemakonesheni eAgat-7 Apple II neFamicom, kuwedzera kune kumwe kuvandudzwa kweBBC nekumhanyisa mhanyisa kwemamwe mashandiro.
Super Korona Gorofu uye Shanghai III iwo maviri eaya matsva arcade anotsigirwa kubva iyi nyowani vhezheni. Izvi zvave kuwanikwa pamwe nekuwedzera kwemaROM matsva uye kutsigirwa kwemidziyo mitsva. Uye izvo hazvisi zvehuwandu hwemitambo yaive yatove neMAME. Saka kana iwe uri mudiwa wemavhidhiyo mitambo, kunyanya arcade michina uye zvekare, usarasikirwa nemukana wekuronga ino yakanaka emulator uye kurodha MAME yeLinux yako ikozvino kubva webhusaiti yepamutemo yeprojekti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » MAME 0.184 inovandudza kutsigira kwayo
Sekuziva kwangu, vanoenda vhezheni 0.182 ... kwete 0.184 sezvazvinotaura mumusoro wenhau, kana 0.128 sekutaura kwazvinoita mukusimudzira kweizvi.